Fifanakalozana fifanakalozana ara-teknika momba ny mpanamory fiara sy serivisy fampahalalana miaraka amin'ny TiAA ao Etazonia-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co, Ltd,
Fifanakalozana fifanakalozana ara-teknika momba ny mpanamory fiaramanidina fiara sy serivisy fampahalalana miaraka amin'ny TiAA any Etazonia
Fotoana: 2016-03-29 Hits: 23
Fanamarihana: Amin'ny maha solontenan'ny vondron'ny filankevitra TiAA azy, ny filoha lefitra Han Hanhua dia nandray anjara tamin'ny fifanakalozana ara-teknika momba ny mpanamory fiaramanidina sy ny mombamomba ny serivisy any Etazonia. Ny lohahevitra lehibe amin'ny fifanakalozana ara-teknika dia havoaka maharitra amin'ny tranokala.
Ny 28 martsa 2016:
Ny fijanonana voalohany: mitsidika ny institiota fitaterana marani-tsaina / tsy misy loto ary ny MCITY any UMich
University of Michigan izay manana tantara 200 mahery no nanangana ny fanandramana an-tserasera voalohany tamin'ny volana Jolay, 2015, ary nanatanteraka fanandramana V2V, V2I sy V2P ho an'ireo fiara maherin'ny 2000 ao Ann Arbor ao amin'ny fototry ny DSRC. Nanangona data manankarena ao amin'ny sehatry ny Human Factor ny andrim-panjakana, ary nanangana ny sahan-kevitra amin'ny fanadinam-pifandraisana tsy manam-paharoa amin'ny MCITY miaraka amin'ny fiaraha-miasa ao amin'ny governemanta federaly Michigan. Hatramin'izao, dia nanatanteraka ny fanadinana tsy misy mpiasan'ny FORD, GE, TOYOTA, HONDA, DELPHI ary orinasa mpanome tolotra ampolony sy mpamatsy Tie1 amin'ny vidiny USD10, 000 isan'andro.
Andao aloha andeha hojerentsika ilay tanàna namboarina ho an'ny MCITY mba hanao fanadinana tsy nitarika. Miorina ao Ann Arbor, izay misy fandrakofana mirefy 32 hektara (manodidina ny 129,000 metatra toradroa), napetrak'i University of Michigan i Mcity, amin'ny totalin'ny USD $ 10,000,000 (miaraka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny anjerimanontolo sy ny orinasa). Izy io no tanàna simulate voalohany tamin'ny tontolo nandalo ny endrika fanaraha-maso ny famoronana variana amin'ny tontolo iainana, natsangana ho fanandramana ny fitaterana fiara tsy misy mpiambina, V2V, V2I ary teknolojia tamba-jotra hafa.
Ny etsy ambony dia ny lamin'i MCITY, izay misy fizarana roa:
Ankehitriny, jereo ny tena sarintany amin'ny MCITY.
Tao amin'ny tanàna voahaja toy izany, MCITY, fiara tsy nitarika dia afaka nirohotra malalaka. Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny tena tontolo iainana ary mandray an-tànana ny ankamaroan'ny tontolo iainana. Tao no nanangana tetezana, torelina, tress, poleta, jiro arabe, lalamby lalamby, lalambe, lalan-kely namboarin'ireo lalana tamin'ny zoro samihafa, boribory ary trano maro hafa. Tao an-tanàna dia saika ahitana karazana jiro famantarana sy famantarana an-dalambe manerana an'i Etazonia. Azonao jerena etsy sy eroa izy ireo, eny fa na ireo lozam-pifamoivoizana aza ary famantarana ny làlana.
Eto aza dia miaina ny Sebastian iray, izay mpandeha an-tongotra voafehin'ny fitaovam-pamokarana. Afaka nandeha an-tsokosoko namakivaky lalana izy, tiany ny hitsambikina tampoka teo anoloan'ny fiara iray, mba hizaha toetra raha afaka mandray fepetra mipoitra ilay fiara tsy nitana azy na tsia.
Ny sahan'ny fitsapana tsy nitarika dia manome sehatra tsara ho an'ny fikarohana momba ny olona tsy voatanisa. Tsy isalasalana fa hampiroborobo tokoa ny fivoaran'ny teknolojia tsy voatanisa. Hatramin'izao, orinasa mpanao fiara maro no niara-niasa tamin'ny University of Michigan, mba hizaha toetra ireo fiara tsy nitondra azy ireo tao amin'ny MCITY. Raha ny hevintsika dia misy dikany izany, raha ny amin'ilay fiara tsy nitarika. Azontsika sary an-tsaina fa indray andro any amin'ny fiara tsy misy fiara mandeha amin'ny làlana, ahoana no fomba hanamarinana sy hankatoavantsika ireo fiara? Inona no fenitra tokony hofanin'izy ireo alohan'ny handehanana eny an-dàlana? Izao dia mbola banga izao. Ny tanàna namboarina toa an'i MCITY angamba ny foibem-pahefana momba ny fanamarinana ho an'ny fiara tsy voamboatra, izay amin'ny fizahan-toetra maro samihafa no nosedraina ireo fiara tsy nitari-dalana. Ireo mpandalo ihany no afaka nandalo teny an-dàlana.
Nisy seminera ara-teknika fifanakalozana roa no ivony.
1. Avy amin'ny mpanampy mpikaroka, Shan Bao, avy amin'ny ivon-toeram-pampianarana
Izy io dia teo amin'ny fifanakalozana ara-teknika momba ny HUMAN FACTOR. Miorina amin'ny 2000 mahery ny fiara fitiliana napetraka tao amin'ny andrim-panjakana, dia nahangona data manankarena ny andrim-panjakana, anisan'izany ny angon-tsofina fahatsiarovan'ny fiara (radar, laser, visual ary ny toeran'ny GPS ary tsy ny fiara rehetra no nitazona ny sensor rehetra) ary tamin'io fotodrafitrasa io dia nahavita famakafakana angona. amin'ny fitondran-tena fitondran-tena.
Ity dia iray amin'ireo tetik'asan'izy ireo mahazatra.
Natao indrindra ny fifanakalozana ara-teknika momba ny teknolojia fiaramanidina fiara, ny fitsapana ary ny toeran'ny fiaraha-miasa amin'ireo indostria ao amin'ny andrim-panjakana. Amin'ny maha-oniversite any Etazonia voalohany ny fikarohana teknolojia mpanamory fiara,
Nahazo ny loka faha-4 ny oniversite any Michigan tamin'ny fiara tsy matanjaka nokarakarain'ny DARPA. Ny talen'ny teknikan'ny ekipa, miaraka amin'ireo ekipa 3 voalohany, dia niditra tamin'ny faribolana indostrialy. Ny fifanakalozana ara-teknika
avy amin'ny matihanina Peng tafiditra:
1) hetsika MTC dimy lehibe
2) Ny fangatahana sy fanamby ho avy
PREV: Ireo mpanjifa avy amin'ny Dongfeng Motor Group dia nitsidika an'i Nanoradar
MANARAKA : Dr. Li Deyi avy amin'ny Chinese Academy Engineering dia nidera fatratra ny vokatra radar an'i Nanoradar mmw